UNDECIMA JORNADA DE LA LIGA SANTANDER. ESTADIO RAMÓN SÁNCHEZ-PIZJUÁN.
ဒီယဂေိုကျောစတာရဲ့ ပငျနယျတီလှဲခြျောမှုကွောငျ့ ဆီဗီလာနဲ့ပှဲမှာ ၂မှတျဆုံးရှုံးခဲ့ရပမေယျ့ ဒီတိုကျစဈမှူးအပျေါမှာထားတဲ့ သူ့ရဲ့ယုံကွညျမှုကိုထိခိုကျစမှောမဟုတျဘူးလို့ အကျသလကျတီကိုနညျးပွဆီမွှနျနီက ထုတျဖျောပွောဆိုလိုကျပါတယျ။မကျဒရဈအခွစေိုကျအသငျးဟာ ၂၈မိနဈမှာသှငျးယူသှားတဲ့ ဗကျဇျကှကျဇျရဲ့ဂိုးကွောငျ့ အိမျရှငျဆီဗီလာရဲ့ဦးဆောငျမှုခံခဲ့ရပမေယျ့ အရနျခုံကထလာတဲ့ ကျောစတာဟာ ခပြေဂိုးပွနျသှငျးနိုငျအောငျ ပွိုငျဘကျခံစဈကိုခွိမျးခွောကျမှုတှေ လုပျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ခြဲလျဆီးတိုကျစဈမှူးဟောငျးဟာ မိုရာတာ ခပြေဂိုးမသှငျးခငျ ဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့သေးပမေယျ့ ခှငျ့ပွုခွငျးမခံခဲ့ရသလို အမှတျပေးဇယားထိပျဆုံးရောကျနိုငျမယျ့အခှငျ့အရေးအဖွဈ ပငျနယျတီကနျခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့လညျး ဆီဗီလာဂိုးသမားတိုမကျဈဗကျလဈ ကာကှယျသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ကျောစတာဟာ ဒီရာသီပွိုငျပှဲစုံမှာ အကျသလကျတီကိုအတှကျ ၂ဂိုးသာသှငျးထားနိုငျပါသေးတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဆီမွှနျနီကတော့ သူ့ရဲ့တိုကျစဈမှူးနဲ့ပတျသကျပွီး “ ဒီယဂေိုဟာ သူ့ရဲ့ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ အကောငျးဆုံးအခိုကျအတနျ့ကိုရောကျနပေါပွီ။သူ့ကိုယျသူလညျး ကွိုးစားလကေ့ငျြ့နပေါတယျ။ဒီပှဲမှာလညျး သူ တတျနိုငျသမြှလုပျဆောငျခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးမရခဲ့ပါဘူး။တဈစုံတဈယောကျက သူ့လိုလုပျဆောငျနိုငျရငျ ကြှနျတျောတို့ ၂မှတျရမလား။ဒီယဂေိုနဲ့အတူလား။ဒီယဂေိုမပါဘဲနဲ့လား။တကယျလို့ ဒီယဂေိုလို ပေးဆပျနိုငျတဲ့ကစားသမားမြိုးဆိုရငျ ကြှနျတျောကတော့ ယုံကွညျမှုရှိနမှောပါပဲ ” လို့ ဖှငျ့ဟသှားပါတယျ။
အစောပိုငျးပှဲစဉျမှာ ဘာစီလိုနာရှုံးပှဲတှထေ့ားတာကွောငျ့ ပွိုငျဘကျဆီဗီလာမှာလညျး အနိုငျရရငျ အမှတျပေးဇယားထိပျဆုံးရောကျခှငျ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒါကွောငျ့ လိုပီတီဂှီရဲ့အသငျးဟာလညျး ဒီရာသီလာလီဂါခနျြပီယံဆုအတှကျ ခွိမျးခွောကျနိုငျစှမျးရှိတဲ့အသငျးလို့ ဆီမွှနျနီက ခြီးမှနျးသှားပါတယျ။
ဒီယေဂိုကော်စတာရဲ့ ပင်နယ်တီလွဲချော်မှုကြောင့် ဆီဗီလာနဲ့ပွဲမှာ ၂မှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့် ဒီတိုက်စစ်မှူးအပေါ်မှာထားတဲ့ သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ အက်သလက်တီကိုနည်းပြဆီမြွန်နီက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မက်ဒရစ်အခြေစိုက်အသင်းဟာ ၂၈မိနစ်မှာသွင်းယူသွားတဲ့ ဗက်ဇ်ကွက်ဇ်ရဲ့ဂိုးကြောင့် အိမ်ရှင်ဆီဗီလာရဲ့ဦးဆောင်မှုခံခဲ့ရပေမယ့် အရန်ခုံကထလာတဲ့ ကော်စတာဟာ ချေပဂိုးပြန်သွင်းနိုင်အောင် ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကိုခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ချဲလ်ဆီးတိုက်စစ်မှူးဟောင်းဟာ မိုရာတာ ချေပဂိုးမသွင်းခင် ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သေးပေမယ့် ခွင့်ပြုခြင်းမခံခဲ့ရသလို အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးရောက်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးအဖြစ် ပင်နယ်တီကန်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့်လည်း ဆီဗီလာဂိုးသမားတိုမက်စ်ဗက်လစ် ကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကော်စတာဟာ ဒီရာသီပြိုင်ပွဲစုံမှာ အက်သလက်တီကိုအတွက် ၂ဂိုးသာသွင်းထားနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ ဆီမြွန်နီကတော့ သူ့ရဲ့တိုက်စစ်မှူးနဲ့ပတ်သက်ပြီး “ ဒီယေဂိုဟာ သူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်ကိုရောက်နေပါပြီ။သူ့ကိုယ်သူလည်း ကြိုးစားလေ့ကျင့်နေပါတယ်။ဒီပွဲမှာလည်း သူ တတ်နိုင်သမျှလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ဂိုးမရခဲ့ပါဘူး။တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့လိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့ ၂မှတ်ရမလား။ဒီယေဂိုနဲ့အတူလား။ဒီယေဂိုမပါဘဲနဲ့လား။တကယ်လို့ ဒီယေဂိုလို ပေးဆပ်နိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးဆိုရင် ကျွန်တော်ကတော့ ယုံကြည်မှုရှိနေမှာပါပဲ ” လို့ ဖွင့်ဟသွားပါတယ်။အစောပိုင်းပွဲစဉ်မှာ ဘာစီလိုနာရှုံးပွဲတွေ့ထားတာကြောင့် ပြိုင်ဘက်ဆီဗီလာမှာလည်း အနိုင်ရရင် အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးရောက်ခွင့်ရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် လိုပီတီဂွီရဲ့အသင်းဟာလည်း ဒီရာသီလာလီဂါချန်ပီယံဆုအတွက် ခြိမ်းခြောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းလို့ ဆီမြွန်နီက ချီးမွန်းသွားပါတယ်။